नुनको इतिहास: मान्छेले नूनको प्रयोग कहिलेदेखि गर्न थाल्यो ?
Homeसमाचारनुनको इतिहास: मान्छेले नूनको प्रयोग कहिलेदेखि गर्न थाल्यो ?
December 2, 2020 admin समाचार 5770
आजभोलि संसा’रभरि नै खानेकुरालाई स्वा’दिलो बनाउनको लागि नूनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । मानिसको खानामा नून एउटा अभिन्न अंग बनिस’केको छ । नूनको स्वाद चाखिस’केको कसैले पनि नूनबिनाको खाना रु’चाउन सक्दैन । तर नूनको बारेमा थाहा नपाएका प्रा’चीन कालका मानिसहरु चाहिँ के गर्थे होलान् त ? उत्तर सहज छ– उनीहरु नून’बिना नै खानेकुरा खाने गर्थे ।
वास्तवमा, अमेरिका तथा संसा’रका कतिपय ठाउँका मानिसहरुलाई यूरोपि’यनहरुले खानेकुरामा नूनको प्र’योग गर्न सिकाएका थिए । अझै पनि मध्य अफ्रिकाका कति’पय स्थानहरुमा नूनलाई विला’सिताको वस्तु मानिन्छ । त्यहाँ नूनलाई धनी मानिस’हरुले मात्रै उप’योग गर्न सक्छन् ।
हाम्रो शरीरमा नून अति आव’श्यक छ । तर दूध खाने तथा मासुलाई काँचै वा पोलेर खाने समु’दायको लागि थप नूनको आवश्यकतै पर्दैन । उनीहरुले शरीर विका’सको लागि आवश्यक पर्ने मात्राको नून, त्यही दूध र मासुबाट नै पाइर’हेका हुन्छन् । तर शाकाहारी तथा मासुलाई उसिनेर खानेहरुका लागि भने थप नूनको आव’श्यकता पर्दछ ।
मानिसले घुम’न्ते जीवन त्यागेपछि नूनको प्र’योग गर्न थालेको पाइन्छ । विशेष गरेर खेतीपातीको युगमा प्र’वेश गरेपछि मानव जीवनमा नून अ’भिन्न अंग बन्न पुगेको देखिन्छ ।
त्यसो त मानव जीव’नमा नूनको महत्व खानालाई स्वादि’लो बनाउने वा शरीरलाई आव’श्यक पर्ने तत्वको अर्थमा मात्र सीमित छैन । यसको आफ्नै सांकेतिक म’हत्व पनि रहेको पाइन्छ । प्राचीन कालमा देउतालाई बली दिँ’इदा बलीको साथै नून पनि दिने गरिन्छ । त्यसबेला नूनको आफ्नै विशेष धा’र्मिक महत्व रहेको पाइन्छ ।
खानेकुरालाई लामो समय’सम्मका लागि सुर’क्षित गर्नको लागि पनि मानिसहरुले नूनको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । नूनको यही गुणले गर्दा यसलाई लामो समयसम्म सुर’क्षित रहने वस्तुको प्रतीकको रुपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ ।
एक समयमा यूरोप’तिर कुनै पनि सम्झौता वा लिखत गर्नुपर्दा नून हालेको खानेकुरा खाएर तथा खुवाएर गर्ने गरिन्थ्यो । यसो गर्दा त्यो सम्झौता वा लिख’त पक्का र दिगो कालसम्मको लागि भएको मानिन्थ्यो । हाम्रै नेपाली समाजमा पनि कसैकोमा नून हालेको खाना खाएपछि उसको भलाइ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने मा’न्यता कायमनै रहेको छ । भनाइ नै छ– नूनको सोझो गर्नू ।
नूनको महत्व मानि’सले बुझ्दै गएपछि यसको व्या’पारिक महत्व पनि स्थापित हुँदै गयो । रोचक त के छ भने, इटालीको एउटा प्राचीन सडकको नाम नै नूनको बाटो (Via Salaria) रहेको छ । यसको नाम यस्तो हुनुको कारण चाहिँ प्राचीन का’लमा त्यही बाटो भएर नून ल्याउने गरिनाले हो ।
हामीले कतै काम गरेवा’पत लिने मासिक तलबलाई अंग्रेजी भाषामा Salary भनिन्छ । यो शब्द पनि नूनबाट नै आएको हो । प्राचीन रोमनका’लमा सैनिक वा अफि’सरहरुलाई तलबको साटोमा नून नै दिने गरिन्थ्यो । यसबाट पनि त्यसबेला नूनको कति व्या’पक महत्व थियो भन्ने अ’नुमान गर्न सकिन्छ ।-रातोपाटी बाट
कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेको अबस्थामा यि बिद्यार्थीले लेख्न छाडेर बनाए टिकटक(भिडियो हेर्नुहोस)
March 12, 2021 admin समाचार 3366
यतिबेला चलचित्र गोर्खे सिनेमा हल’हरुमा प्र’दर्शन भैरहेको छ । कोजु इन्टरटेन्मेन्ट्को ब्यान’रमा हरि लामा, हरि थापा र तिर्थ कोजुको सहकार्यमा निर्माण भएको सामाजिक कथामा आधा’रित चलचित्र ‘गोर्खे’लाई किम्मत गौतमले नि’र्देशन गरेका हुन चलचित्रमा अर्जुन गुरुङ
आमा नाता पर्नेलाई जब युवकले बेहुली ब’नाएर गाउँमै ल्याए (भिडियो हे’र्नुहोस)
February 10, 2021 admin समाचार 4877
गुल्मीको मुसिकोटमा एक युवकले आफ्नो आमा नाता पर्ने महिलालाई श्रीमती ब’नाएका छन् । आफन्ती र न’जिकको साइनोले आमा भन्नुपर्ने महिलालाई भगाएपछि ति महिलाका श्रीमान मिडियामा आ’एका थिए । नातामा आमा छोरा नाता पर्नेहरुले वि’वाह गरेर
September 2, 2020 admin समाचार 12231
विश्वमा अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण फैलिएसँगै अर्थबजारमा अस्थिरता सिर्जना भएको छ । त्यसैको असर अमेरिकी डलरमा पनि परेको छ । शेयर मार्केट खस्केको, कच्चा तेलको भाउमा गिरावट आएको, सुनमा लगानी गर्नेहरु बढेको लगायत
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (219727)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (211376)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (211056)